ကင်ချီနဲ့ သိတာလေး | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ကင်ချီနဲ့ သိတာလေး
Posted by ဆူး on Oct 18, 2010 in Arts & Humanities, Community & Society, Creative Writing, Drama, Essays.., History, Short Story | 16 comments
သိလို့တော့ မဟုတ်ပေမဲ့ ကင်ချီနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြားဘူးနားဝ ချရေးပေးလိုက်တယ်။ ကင်ချီ အလွယ်လုပ်နည်း တင်တဲ့ သူက တင်တော့ ကင်ချီ ဘာလို့ ကိုရီးယားတွေ စားသလဲ ဆိုတာ သိသင့်တယ် ထင်လို့ပါ။ ကိုရီးယား သမိုင်းမှာ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ အတိုင်းအတာ တော်တော် ရှည်လျားပါတယ်။ စစ်ကြောင့် လူတွေ စားနပ်ရိက္ခာ ရှားပါးမှုတွေ မဖူလုံမှုတွေ ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ စစ်ရှိတဲ့ စစ်ဘေး စစ်ဒဏ် သင့်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ ဒီလို ခံစားခဲ့ရတာ ကြီးပါဘဲ။ တောင် ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်တွေ ကြည့်တာ များတော့ အိုပါးတို့ ဘာတို့တွေတောင် စကားထဲပါလာကြတယ် လူငယ်တွေ အသုံးထဲမှာ ထိုနည်းတူပင် ရုပ်ရှင်ထဲမှာ အားရပါးရ စားပြတော့ ကြည့်တဲ့ လူတွေက စားချင်စိတ်ပေါက်လာကြပြီး သူတို့ ခုံခုံ မင်မင် စားသလို စားကြည့်ချင်လာတယ်။ အမှန်တော့ ကိုရီးယားက စစ်ဘေး စစ်ဒဏ်ကြောင့် အစာရေစာ ရှားပါးသလို ရာသီဥတုက အသီး အရွက် စိုက်ပျိုးလို့ရတာ ၆လ ထက်မပိုပါဘူး ကျန် ၆လကတော့ အေးနေတဲ့ အတွက် အရွက်တွေလည်း နှင်းကိုက်လို့ ပျက်စီးကုန်တာနဲ့ ကြုံရတော့ အရွက်နဲ့ အသီးတွေ ထွက်တဲ့ ရာသီမှာ ကင်ချီ (ချဉ်ဘတ်) လုပ်ပြီး အိုးထဲမှာ သိမ်းထားလိုက်ပါတယ် အေးတဲ့ ရာသီ အရွက် အသီး ရှားပါးတော့ ဒီ အိုးထဲက ကင်ချီတွေ စားပြီး ရိက္ခာမျှတအောင်နေရပါတယ်။ တောင်ကိုရီးယား ဆိုရင် အရင်က တော်တော် ဆင်းရဲပါတယ် စစ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ နိုင်ငံ ထူထောင် နိုင်ဖို့ အတွက် အစွမ်းကုန် တိုင်းသူပြည်သားကော အစိုးရပါ ကြိုးစားအားထုတ်ကြပါတယ်။ ကိုရီးယား မှာ အသက် ၆၀ကျော် လူကြီးပိုင်းတွေဆို ဂျပန်လိုတတ်ကြပါတယ်။ မြန်မာပြည်က လူကြီးပိုင်းတွေ အင်္ဂလိပ်စကား တတ်သလိုမျိုး.. ဂျပန်လက်အောက်ကျရောက်ခဲ့တဲ့ အတွက်ကြောင့်ပါ။ စစ်ကတော့ မြောက်နဲ့ တောင် နယ်မြေအတွက် စစ်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ စစ်ပြီးတဲ့ အခါမှာတော့ အားလုံး ကြိုးစား အားထုတ်မှု ဘယ်လောက်များလဲ ဆိုရင် လူတိုင်း အလုပ်လုပ်ကြတယ် အစားအစာ ကုန်ကျ စရိတ်သက်သာအောင် အသားစားသုံးမှု လျော့ချပြီး တိုင်းပြည်ထွက် ကင်ချီနဲ့ ထမင်း စားပြီး ၀မ်းရေး ဖြေရှင်းခဲ့ကြရပါတယ်။ ကိုရီးယား ကားထဲမှာ အားရပါးရ စားနေတဲ့ တော့ပုကီ ဆိုတာ ဆန်နဲ့ လုပ်တဲ့ မုန့် ဘဲ ပြောရမလား အနီးစပ်ဆုံး အလွယ်ပြောရရင်တော့ နန်းကြိး အလုံး တုတ်တုတ်ကြီးလို့ ပြောရမှာဘဲ။ သူကတော့ ဆန်ကောင်းကောင်းနဲ့ သေချာလုပ်ထားတော့ နုညံမှု ကတော့ ရှိတယ်။ ဒီတိုင်း စားရင်တော့ ထမင်းစားသလိုပါဘဲ ဘာအရသာမှ မရှိဘူး။ တချိန်ကဆို မနက်ရောက်ရင် ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အော်လံကြီးတွေနဲ့ ၆နာရီ လောက်ဆို စောစောထ မျက်နှာသစ် သွားတိုက် အလုပ်သွား အဲဒီလို လှုံဆော်တဲ့ အသံတွေ ဖွင့်ပြီး အိပ်ယာ မထတဲ့ ဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဲဒိလို မဖွင့်တော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ် လို့ ကြားသိရပါတယ်။ အားလုံး စောစောထပြီး လုပ်ငန်းခွင်ဝင်ရအောင် အလုပ်မလုပ်ဘဲ နေတာမျိုး မဇြစ်ရအောင် လုပ်ခဲ့တာ အခု တော်တော် တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်။ ကိုရီးယား ဟော်တယ်တွေဆိုရင် သူတို့ လူမျိုးတွေ လည်ပတ်ဖို့ အတွက် ဖွင့်ခဲ့တာများပါတယ်။ နိုင်ငံခြားသား ခရီးသည်ကို မမျှော်ပါဘူး။ သူတို့ လူမျိုး အရမ်းချစ်တတ်အောင် နဲ့ လူမျိုး အချင်းချင်း အားပေးတတ်အောင် ငယ်စဉ်ထဲက စနစ်တကျ သင်ကြားပေးထားကြတာပါ။ အဆင့်မြင့်ဟော်တယ်တွေ မှာဆိုရင် သူ့ လူမျိုး အတွက် စီစဉ်ဖွင့် သလဲ ဆိုတကာတော့ ဟိုတယ်တွေ မှာ ကိုရီးယားတွေ အကြိုက် အောက်မှာ ခင်းအိပ်ချင်တဲ့ သူတွေ အတွက် ဘီဒို တလုံးနဲ့ အိပ်ယာလိပ်ထားပေးထားပါတယ်။ မိသားစုလိုက် ခရီးထွက်ကြတာ များတော့ မိသားစုလိုက် နေတဲ့ အခန်းလိုမျိုး ချက်ပြုတ်ရန် မီးဖို စားသောက်ဖို့ စားပွဲနဲ့ အိုးခွက် ပန်ကန် ကော်ဖီခွက် တွေပါ ထည့်သွင်း ထားတာ တွေရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေမှာ ဆိုလည်း အောက်ခြေ မြေအောက်ထပ်မှာ စူပါမားကတ်ကြီးတွေ ဖွင့်ထားပါတယ်။ ဟိုတယ် လာတဲ့ မိသားစုတွေ အောက်ထပ် ဆင်းဝယ် အပေါ်တက် ချက်ပြုတ်စားသောက် အိပ်စက် အနားယူ ထည့်သွင်း စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်။ ကိုရီးယားတွေ အတွေးအမြင် တခုပြောင်းလဲ လာတာကတော့ မီဒီယာနဲ့ တိုင်းပြည်ကို လူသိအောင် လုပ်မယ် ဆိုပြီး လုပ်ကြတာပါဘဲ။ ပြောတဲ့ အတိုင်း တကယ်လည်း မီဒီယာနဲ့ တိုင်းပြည်ကို လူတွေ သိလာကြပြီး ခရီးသွားတွေ စတင်ပြီး သွားနေကြပါတယ်။ ဟိုတယ်တွေ အပြင် အဆင်ကတော့ ကိုရီးယား လူမျိုး အကြိုက်တွေ ပါဘဲ။ မီဒီယာတွေမှာလည်း မူဝါဒ တခု ရှိပါတယ် ဆေးလိပ်တွေ မလိုအပ်ဘဲ မသောက်ပြရပါဘူး။ ရုပ်ရှင်တိုင်းမှာ မိသားစု ထမင်းစားဝိုင်း နောက်ပြိး ကိုရီးယား အစားအစာတွေ မိသားစု ချစ်ခင်ကြပုံတွေ ပါတဲ့ ရိုက်ကွင်း ထည့်ရိုက်ရမယ် ဘာအတွက်လည်း ဆိုတော့ ကိုရီးယား လူမျိုး အလွန်ယဉ်ကျေးပြူငှာပြီး နွေးထွေးတဲ့ မိသားစု ဘ၀တွေနဲ့ အားကျစေအောင် ထို့အပြင် ကိုရီးယား ထွက်ကုန် ဖြစ်တဲ့ ကင်ချီကို နှစ်သက် အားရစွာ စားပြရင် ပရိတ်သက် စိတ်ဝင်စားပြီး ကိုရီးယား ကင်ချီကို ကမ္ဘာအနှံ တင်ပို့လို့ရပါပြီ။ ဂျပန်မှာလည်း ကင်ချီ ရှိပါတယ် ဂျပန်က အရင် ကင်ချီ တင်ပို့မှုတွေ လုပ်ခဲ့ပေမဲ့ ကိုရီးယားနိုင်ငံ က ကန့်ကွက်တဲ့ အတွက် ဂျပန် ကင်ချီ တင်ပို့မှုကို ရပ်ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့ အထိ ကိုရီးယားက ကင်ချီ ကမ္ဘာကျော် လာသလို တိုင်းပြည် အရင်းအမြစ် ပညာ အဖြစ် အမြတ်တနိုး လက်ခံယူဆ ထားကြပါတယ်။ ကိုရီးယားတွေကတော့ ကင်ချီသိပ်တဲ့ စဉ်းအိုးပညာကို ဂျပန်တွေက လိုချင်လို့ သူတို့ တိုင်းပြည်ကို လာတိုက်သလိုလို ပြောတာတွေတောင် ကြားခဲ့ မိသေးတယ်။ ကိုရီးယား ရုပ်ရှင်တွေမှာ တိုင်းပြည် သာယာ လှပမှု နဲ့ ရှုခင်း ကောင်းကို ခံစားပြီး စိတ်အပန်း ဖြေနိုင်တဲ့ ပုံတွေ လူတွေ အသိပညာနဲ့ အတွေ အခေါ်တွေ လိုရာဘက် ရောက်အောင် ဆွဲဆောင် နိုင်တာ အများကြိး ရှိလာ သလို ကမ္ဘာမှာလည်း ကိုရီးယား ရုပ်ရှင် သရုပ်ဆောင်တွေ သံတမန်တွေ ဖြစ်လာကြတာတွေ သိနေကြတဲ့ အတိုင်း ကိုရီးယား က အပြောတင်မဟုတ် တကယ် လုပ်ရင် တကယ်ဖြစ်ရမယ်လို့ ယုံကြည်ပြိး တကယ် လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ ကိုရီးယားထက် အဆ ပေါင်းများစွာ ဂျပန်ပြည်က အဆင့်အတန်း မြင့်မားမှုတွေ ရှိနေပေမဲ့ အခု အချိန်မှာ ပခုံးချင်း ရှင်လို့ရအောင် ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိုရီးယား ရောက်ဖူးရင်တော့ ကိုရီးယားတွေ ရဲ့ ဇာတိသွေး ဇာတိမာန် အမျိုးချစ်စိတ် ဘယ်လောက် ရှိတယ် ဆိုတာ သိကြမှာပါ။ တချိန်က ချွတ်ချုံကျခဲ့ တဲ့ ကိုရီးယား နိုင်ငံ ဟာ အခုတော့ အစစ တိုးတက် စည်ပင်နေပါပြီ။ သူတို့ရဲ့ အတွေးအခေါ် ဘဲ ကောင်းတယ် ပြောရမလား လူတွေက ဘဲ အမျိုးချစ်တာ ပြောရမလား အစိုးရက တိုင်းပြည် ကောင်းကျိုးမှ လွဲ၍ တခြား ဘာမှ စိတ်မ၀င်စားဘဲ ဖြည့်တင်း လုပ်ဆောင် ခဲ့တာလည်း ကြိးမားတဲ့ အထောက်အပံ့ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သိတာလေးတွေ ချရေးလိုက်ပါတယ်။ သိတဲ့ လူတွေ ရှိရင်လည်း ကွန်မန့်လေးတွေနဲ့ မျှဝေပေးပါ စောင့်ဖတ်နေမယ်နော်။﻿
ဦးလေးဖတ်ရေ.. ကွန်မန့် ပြန်ရေးပေးနော်
အတင်းရေးခိုင်းတာဘဲ ..ကိုယ်မှမသိဘဲ ..ဆူးပြောတာဟုတ်မှာပါ..
Q. I grew up in an Asian household and love to eat fermented vegetables like kimchi. But I’m confused about whether these foods are good for me or may posearisk for stomach cancer because of the fermentation. Are there any studies on this? —Lydia Kang, Omaha
ကိုရီးယားက သူတို့တီဗီအစီအစဉ်တခုမှာ ကင်မ်ချီဟာ ကင်ဆာကာကွယ်နိုင်တဲ့အကြောင်း..ထပ်ခါပြတယ်..။
ဘာပဲပြောပြော.. ယူအက်စ်ကတရုတ်ဆိုင်။ ဂျပန်ဆိုင်။ အာရှမားကက်တွေမှာ ကင်မ်ချီလွယ်လွယ်ဝယ်လို့ရပါတယ်..။
မြန်မာကလုပ်အား..အများကြီးဈေးပေါတာမို့ ..ဈေးကွက်မှာ အေးဆေးနိုင်နိုင်ပါတယ်..။
ကိုရီးယား ငွေတန်ဖိုးနဲ့ မြန်မာ ငွေတန်ဖိုးက သိပ်မကွာပါဘူး ယူအက်စ ၁ ဒေါ်လာကို မြန်မာလိုဘဲ ၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ဆိုတော့ တူတယ်ပြောရမှာဘဲ.. ကိုရီးယားမှာ လက်နဲ့ မှန်းတာတော့ ၂၅ကျပ်သားလောက် ရှိမယ် ၈၀၀၀ လောက် ရှိတယ် ဒါတောင် ဈေးသက်သာတဲ့ သာမာန်ဆိုင်.. မြန်မာ မှာတော့ ရှမ်းချဉ်ဖတ် ဆိုပါတော့.. ၂၅ကျပ်သားလောက်ကို ၅၀၀-၁၀၀၀ ၀န်းကျင်ထက် မပိုပါဘူး။ နာမည်သာကွာတာပါ ချဉ်ဖတ်ကတော့ ချဉ်ဖတ်ဘဲ.. နေရာဒေသ အလိုက် လုပ်ပုံ လုပ်နည်းနဲ့ အရသာဘဲ ကွာခြားတာပါ။
ကိုရီးယားကတော့ ၀ါဒဖြန့်တာ တော်တယ်.. ကင်ဆာ ကာကွယ်နိုင်တယ် ဆိုရင် သူတို့ ဆီက လူတွေ ကင်ချီ ဒီလောက် စားနေကြတာ.. ကင်ဆာ ကာကွယ်ပြီး အဖြစ်နည်းရမှာပေါ့.. ကြားမိတာကတော့ သွေးကင်ဆာ သိပ်ဖြစ်တယ် လို့ကြားမိတယ်.. အသားဖြူတဲ့ သူတွေ (အရှေ့တိုင်းအသားဖြူ) နေရောင်ကြောင့် ဆိုလား.. ဘာလား သွေးကင်ဆာ အဖြစ်များတယ် ပြောတာဘဲ။ ကြားမိတာလေး ပြောပြတာ..
ဖတ် မှုတ်ပါဘူး ..ဖက်ပါ ..ဖက်ခိုင်းနေတာမှုတ်ဘူးနော် …ဦးလေးဖက်လို့ပြောတာ …
ရေးပြီးသား ကွန်မင့်ကြီးပြန်ေ၇းရမှာဆိုတော့ … ဟုတ်သေးပါဘူး …. နဲနဲတော့ပြောင်းရေးမယ်။
မြန်မာတွေ မုန့်ဟင်းခါးချက်ရင် .. ငှက်ပြောအူထဲ့ချက်တယ် ..အဲဒါ ..မုန့်ဟင်းခါးရဲ့သဘောက ၀မ်းသွားတတ်လို့ ငှက်ပျောအူနဲ့ထိမ်းထားတာပါ။
အဲလိုမျိုးဘဲ …. ကိုရီးယားမှာ..သူတို့ထမင်းစားပြီး .. ကင်ချိမစားဘဲနေကြည့် ..၀မ်းမသွားဘဲ ဒုက္ခရောက်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ကင်ချိစားရင်စား ဒါမှမဟုတ် သူတို့ချဉ်ရေဟင်းကိုသောက် ဒါမှအဆင်ပြေပါတယ်။ သူတို့ဆီမှာ ချဉ်ရေဟင်း
ကိုကောင်းကောင်း အရသာရှိရှိအမြဲတန်းချက်လေ့ရှိတယ်။ ကျနော်သွားပြီးအလုပ်လုပ်တုန်းက .. စက်ရုံတခုမှာပေါ့ …စက်ပျက်ပြီဆိုတာနဲ့
ကျနော်တို့က ..ရသလောက်အိပ်တော့တာဘဲ။ ကိုရီးယားအလုပ်သမားများကတော့ စက်ပျက်လို့ရပ်ထားရရင် စက်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေကို
ဖုံသုတ် သန့်ရှင်းရေးလုပ်နေလေ့ရှိတယ် … စိတ်ဓာတ်ချင်းလဲကွာပါတယ်။ သူတို့ကအဆီသိပ်မစားကြဘူး … ဒါကြောင့်အသဲအဆီဖုံးသိပ်မဖြစ်ကြဘူး။ မြန်မာတွေထက်ပိုပြီးအရက်သောက်နိုင်တာအဲဒါကြောင့်ထင်ရဲ့။ ပြောရင်းဆိုရင်း soju ပုလင်း
စိမ်းလေးကို လွမ်းမိတယ် …။
ဂျပန်ဆန်(ထမင်း)လည်း ကိုရီးယားနဲ့တူတာပဲ..ဦးဖက်ရေ…။ မြန်မာလို ရှမ်းဆန်ပေါ့။
မိဆောရှိရု ခေါ်တဲ့ ပဲဟင်းရည်နဲ့တော့တွဲစားသောက်တယ်…။
အင်း..ပြောရင်းသတိရလာပြီ..။ ဂျပန်မျာဂျပန် အိုရှင်းကိုးဆိုတာရှိသားပဲ..။
ရှမ်းလည်း… ရှမ်းချဉ်ဖတ်တို့။ ရှမ်းမုံညှင်းချဉ်တို့ရှိတာပဲ..။
ဦးလေး ၀တုတ် ဘိုစာကို မြန်မာ စာက မွေးစားတာ ဘယ်ဟာမှားတယ် ဘယ်ဟာ မှန်တယ် ဆိုတာ ပြောရခက်မယ်ထင်တယ်နော်.. အရေးမှာ အသုံးမတွင်ကျယ်ဘဲ အပြောမှာ ဒဲ့ ပြောတဲ့ စာလုံးမျိုးဆိုရင် မြန်မာစာ ဠာနက ပါမောက္ခ ကိုယ်တိုင်တောင် ယောင်ဝါးဝါး ဖြစ်နေမယ် ထင်တယ် ဟုတ်တယ် မလား
ဦးဝတုတ်.. စိတ်ဓါတ်ချင်းကွာ ဆို လူမျိုးချင်းမှ မတူတာ.. ဦးဝတုတ်ရဲ့.. ကိုရီးယား က အချက်အပြုတ်ကတော့ အချိုမှုန့် အရသာ လျှာထုံနေတဲ့ မြန်မာ ပါးစပ်နဲ့တော့ တော်တော် စိတ်ညစ်ဖို့ကောင်းသား.. မစားနိုင်ဘူး.. တအားငြီးငွေးတယ် ကိုရီးယားကတော့ ကင်ချီ အမျိုးစုံ လုပ်တာ အမျိုးပေါင်း ၂၀၀ ဆိုလား ၅၀၀ ဆိုလား ရှိတယ် ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ ကိုရီးယား ငရုတ်သီးက တထွာတောင် ကျော်တယ် အရောင်ကလည်း ရဲနေတာဘဲ အရောင်ကများပြီး အစပ်က နဲတယ်လို့ ခံစားရတယ်။ ပြောရင်းနဲ့ ဘယ်ရောက်သွားလဲ မသိဘူး..
တချိန်ကဆို မနက်ရောက်ရင် ရပ်ကွက်တိုင်းမှာ အော်လံကြီးတွေနဲ့ ၆နာရီ လောက်ဆို စောစောထ မျက်နှာသစ် သွားတိုက် အလုပ်သွား အဲဒီလို လှုံဆော်တဲ့ အသံတွေ ဖွင့်ပြီး အိပ်ယာ မထတဲ့ ဘဲ မနေနိုင်အောင် ဖွင့်ခဲ့ကြတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း အဲဒိလို မဖွင့်တော့ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ အရင်ကတော့ ဖွင့်ခဲ့ဘူးတယ် လို့ ကြားသိရ………….
အဲဒါ ဘယ်ခေတ်က အော်တာလဲဟင်.. ဒီအရွယ် သက်တမ်း တလျောက်အထိ စောစော ထဖို့ အော်တာတော့ မကြားဘူးဘူး.. တကယ်မသိလို့မေးတာပါ.. ဆွမ်းလောင်းဖို့ ဓမ္မာရုံက ဖွင့်တာဘဲ ကြားမိတယ်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်တခုလုံးဟာ ဟိုးတချိန်က မဟာမြန်မာတွေရဲ့ လက်အောက်ခံ ကျွန်းလေးတခ။ အချိန်ကတော့ ဘဒ္ဒကမ္ဘာမတိုင်ခင် ကမ္ဘာတခုတုန်းကပါ။ အချိန်ကာလက အရေးမကြီးပါဘူး၊ အဖြစ်အပျက်ကသာ အရေးကြီးတာပါ။ ဒီလိုပဌာန်းဆက်ရှိခဲ့လို့လည်း ကိုရီးယားရုပ်ရှင်မင်းသမီး မင်းသားတွေဟာ မြန်မာပြည်သားတွေ အာရုံခံစားဖို့ တီဗွီပေါ်မှာ ဖျော်ဖြေပေးနေရတာပေါ့။
ပဌာန်းဆက်၊ပဌာန်းဆက်နဲ့ တအားဖက်ပြီး ကြံကြံသွားတတ်တဲ့ဘိုးတော်များခေတ်မို့ ..။
ဘိုးတော်ကို သမာဓိပျက်အောင် အနှောင်းထားခိုင်းနေတယ်.. တယ်ခက်တာဘဲ.. တောထဲမှာ ဆေးကြိမ်လုံးနဲ့ တို့ထားတဲ့ ကောင်မလေးတွေ ငိုနေအုန်းမယ်။
ဟုတ်တယ်နေဝန်းနီရေ..ငယ်ငယ်တုန်းက ကျောင်းပိတ်ရက် ဒီဇင်ဘာလ မနက်စောစော ဆိုရင် အဖေနဲ့အတူ လမ်းလျောက်ပွဲမှာ ဝင်နွှဲတာမှတ်မိတယ်။ လမ်းလျောက်တဲ့သူတွေကို အဲဒီတုန်းက ကောက်ညှင်းပေါင်းနဲ့ အုန်းသီး အလကားကျွေးတယ်။ အခုတော့ ယုံတမ်းစကားတွေလို ဖြစ်သွားပြီပေါ့ဗျာ။
ဆူး မမွေးခင်က ကိစ္စတွေ ဖြစ်နေတာကိုး.. ဒါကြောင့် မသိတာ.. မှတ်သားထားပါ့မယ်..
အခုတစ်ခါပြန်ဖတ်တော့လဲ စိတ်ဝင်စားစရာပြန်ကောင်းနေတာပဲ …
တစ်နှစ်တောင်ပြည့်တော့မယ် … ဆန်းသစ်နေတုန်းပဲနော် …